Bilaogera Iraniana : Mamahana Bilaogy Ny Tontolon’ny Literatiora · Global Voices teny Malagasy
Bilaogera Iraniana : Mamahana Bilaogy Ny Tontolon'ny Literatiora
Voadika ny 16 Jona 2017 4:03 GMT
(Marihina fa tamin'ny 13 Septambra 2005 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Mihamaro hatrany ny mpanoratra sy poety Iraniana izay lasa bilaogera za-draharaha. Hitantsika bebe kokoa ao amin'ny bilaoginy ny famoronany . Mazava ho azy amin'ny teny Persiana. Nanoratra ny tantarany voalohany tao amin'ny bilaoginy i Moniro RavaniPour, mpanoratra Iraniana malaza. Nanoratra tantara fohy sy tononkalo tsy tapaka tao amin'ny bilaoginy manokana i Abbas Marofi , mpanoratra monina any Alemaina . Midika izany fa lasa loharanon'ny literatiora avo lenta sy toerana ho an'ny mpamaky ny weblogs mba hahitan'izy ireo famoronana vaovao, hametrahana fanehoan-kevitra sy hamantarana ny momba ny fiainana andavanandron'ny mpanoratra tena ankafizin'izy ireo . Mivaky toy izao ny iray amin'ireo tononkalon'i Marofi:
“My love I will not lose you again. Even if street is crowded I will hold your hand and I will become peaceful”.
” Tsy avelako ho lasan'olona intsony ianao ry fitiavako. Ho tantanako ianao na dia feno olona aza ny làlana ary ho mandry ny saiko “.
Poeta Iraniana iray hafa monina any Frantsa i Yadola Royai , izay manoratra tsindraindray ny tononkalony ao amin'ny bilaoginy. Poety mpisava lalana izy talohan'ny revolisiona ary nanome aingam-panahy ny maro hafa.
Tena mahavariana ihany koa ny mahita ireo mpanoratra tanora afaka mizara ny tantarany sy ny tononkalony amin'ny hafa ao amin'ny bilaoginy. Dastangoo ny iray amin'izy ireo izay midika hoe mpitantara amin'ny teny Persiana. Teraka tamin'ny taona 1981 tao Iran i Dastangoo ary tsy nandefa an'i Dastangoo tany an-tsekoly ny reniny satria tsy tiany ny sekolim-panjakana hampianatra ny zanany. Nianatra nanoratra sy namaky teny tao an-trano i Dastangoo ary nanomboka nanoratra tantara izy rehefa 12 taona . Indraindray mahagaga kokoa ny tena zava-misy noho ny tantara foronina!
Na izany aza, maneho ny heviny bebe kokoa ao anatin'ny bilaogy ireo mpanoratra matihanina sy ireo vaovao amin'ny literatiora. Herijika iray hahitana ny talenta vaovao sy ny asasoratra tsy misy sivana.